China Hammer Mills ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Umshini wokugaya isando ulungele izingongolo zommbila, izingongolo zikakolweni, izingongolo zikabhontshisi, izingquza zikakotini nezinye izigaxa zezitshalo ezahlukahlukene. Ingakwazi ukuxolela izinto zibe yizicucu ezincane. Umshini wokwenza ummbila wommbila ungathuthukisa izinga lokudla kwesilwane, isilinganiso sokudla nokugayeka komzimba.
Ngasikhathi sinye, ingagaya noma iziphi izitshalo, ummbila, ukolweni, ubhontshisi wesoya, bese uyigaya ibe ufulawa, ohlanzekile futhi ohlanzekile, futhi ongadliwa.
Lo mshini ungumshini wezinhloso ezimbili onenani elifanele nekhwalithi ezinzile. Sekukonke, umshini ulula ukusebenza, umshini owodwa wezinhloso eziningi, ungahlangabezana nezidingo zokulima komndeni kanye nemfuyo.
Ukusebenza kahle komkhiqizo
Ukugaya umsebenzi: Izinto zingena ku-hopper bese zingena egumbini lokuchoboza. Ngemuva kokushaywa ngesando esinejubane elikhulu, siyachotshozwa ngokushesha ngaphansi komthelela, bese singena echwebeni lokukhipha ekugcineni komzimba womshini ngokusebenzisa imbobo yesikrini, futhi sikhishwe emshinini.
Umsebenzi wotshani: Ukudla kotshani kungena egumbini lokuchoboza kusuka emnyango wotshani. Ngemuva kokuthi i-guillotine isikiwe, ishaywa ngesando futhi inomsebenzi wokungqubuzana ukuthambisa ifolishi nokwandisa ukudla okudliwayo.
Umshini ungafakelwa injini kadizili noma imoto kagesi. Uhlaka lokuxhaswa kokufakwa kwamandla luzokwenziwa ngaphambi kokushiya ifektri. Amakhasimende angakhetha ngokuya ngezimo zendawo. Kunamasondo amane amancane ngaphansi kohlaka ukwenza lula ukusebenza phakathi kwezindawo ezahlukahlukene.
Ngaphambi kokuhlolwa, hlola ukuthi ibhande liqinile yini, noma ngabe ijubane linengqondo yini, noma ngabe kukhona uwoyela endaweni yokugcoba, noma ngabe izikulufo engxenyeni ngayinye zivulekile, uma kukhona into embi okufanele uyiqede ngaphambi kokuqala, idling imizuzu emi-2-3 , ejwayelekile ngaphambi kokondla umsebenzi.
Langaphambilini I-Gross Choppers
Olandelayo: IHammer Mills-2